Xildhibaano ka tirsan Puntland oo dalbaday in la sii daayo Guddiga Waddada Boosaaso | Dalka Times - News and Politics
Home LOCAL Xildhibaano ka tirsan Puntland oo dalbaday in la sii daayo Guddiga Waddada...
Xildhibaano ka tirsan Puntland oo dalbaday in la sii daayo Guddiga Waddada Boosaaso
Waxaa Magaalooyinka Garoowe iyo Boosaaso ee maamulka Puntland ay ku kala xiran yihiin xubno ka tirsan Guddiga Dhismaha Waddada Magaalada Boosaaso ayaa waxaa Maanta xarigaas ka hadlay Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka dowlad Goboleedka Puntland.
Qaar kamid ah Xildhibaanada Puntland oo Maanta Warbaahinta kula hadlay Magaalada Garoowe ayaa sheegay in Xukuumadda Madaxweyne Saciid Deni laga doonayo in raali gelin ka bixiso xariga loo geystay xubnaha Guddiga Dhismaha Waddada,isla markaana laga doonayo inay bixiyaan lacag Magdhow ah.
Sidoo kale Xildhibaanada ka tirsan Puntland ayaa sheegay in qodobo kamid ah Dastuurka Puntland uu qabo in qofkasta oo lasoo eedeeyo 45-Saacadood lagu hor geeyo Maxkamad,iyagoona xusay in aan loo baahneyn in dadka la iska xirto.
Falka lagu xiray xubnaha ka tirsan Guddiga Dhismaha Waddada Magaalada Boosaaso ayaa waxaa ay ku tilmaameen Xildhibaanada in uu yahay mid ku xadgudbaya Dastuurka u yaalla dowlad Goboleedka Puntland.
Si kastaba Xariga loo heystay xubnaha ka tirsan Guddiga Dhismaha Waddada Magaalada Boosaaso ayaa waxaa uu yimid,kadib markii ay qaateen lacag ay u soo dirtay dowladda Federaal Soomaaliya,waxaana Xubnaha la xiray ku jira Sheekh Maxamed Macallin Axmed oo ahaa Guddoomiyihii Guddigaas,kaasi oo xalay lagu xiray Magaalada Boosaaso.